Ejiji Egwuregwu News
The American brand Diane von Furstenberg na-arụpụta ezigbo ọnụ na ngwaahịa, nke, Otú ọ dị, na-enweta kwesịrị ekwesị ewu ewu n'etiti ndị inyom ejiji n'ụwa nile. Ngwa niile nke ndị na-ewu ewu a magburu onwe ha na-arụ ọrụ, ma n'otu oge ahụ, ha nwere oyiyi nke onye nwe ha na sexy. Usoro nke Diane von Furstenberg ngwaahịa gụnyere uwe ejiji na uwe ndị ọzọ, yana akpụkpọ ụkwụ, akpa na ngwa ndị ọzọ, mmanụ na ọla.
Akụkọ banyere ika Diane von Furstenberg
Na nke mbụ, a na-akpọ aha nke ika a n'afọ ndị 1970, mgbe onye nchoputa ya bụ Diane von Furstenberg meghere akpa uwe ya maka ụmụ nwanyị. A maara taa, onye mmepụta ejiji nwere mgbọrọgwụ ndị Juu, mana ịmalite ọrụ ya na mbụ ọ ghọrọ Switzerland, mgbe ahụ, na France.
Diana von Furstenberg ji ọsọ ọsọ merie ihu ọma nke ụmụ nwanyị Europe na njedebe nke iri afọ nke iri abụọ. Ndị inyom a ma ama na-abịakwute ya mgbe nile ma rịọ ya ka ọ dọọ akwa ma ọ bụ dozie uwe ejiji, ọganihu nke ika ahụ adịghịkwa ewe oge.
Obere oge ka e mesịrị, Diana von Furstenberg malitekwara ịme ihe. Na 2001, onye mmepụta maka oge nke abụọ lụrụ onye America billionaire Barry Diller, otu afọ emesịkwara natara ụmụ amaala United States . Kemgbe ahụ, akara Diane von Furstenberg aghọwo ọmarịcha ewu ewu na Europe, kamakwa na America.
Taa Diane von Furstenberg abughi nani onye mmebe ejiji ejiji, onye nwe ya na onye nchoputa ulo ndi ozo ya, kamakwa onye isi nke American Council of Fashion Designers.
Uwe Diane von Furstenberg
Dị ka Diane von Furstenberg n'onwe ya si kwuo, n'omume mbụ ya, ọ dịghị ihe zuru okè - ha bụ uwe nkịtị na aka uwe. Ka ọ dị ugbu a, uwe na-esi ísì, ma ọ bụ uwe-akwa, pụtara na akara nke Diane von Furstenberg na 1972, mebiri ihe ndekọ niile ọ ga-ekwe omume.
A na-eji uwe a dị mfe nghọta - ụda anụ na mgbakwunye nke viscose. O nwere ihe nkpu okwu na-ekwu okwu n'ezoghị ọnụ na "hourglass," bụ ndị e depụtara ya site n'enyemaka nke okpukpu abụọ agbụ gburugburu agbụ.
Ndị na-emepụta ihe n'oge ahụ nabatara ihe ọhụrụ a, n'ihi na uwe ejiji na-adị mfe wepụ ma yiwe akwa, ihe a na-etinye na ya enweghị ihe ọ bụla, nke mere ka ngwaahịa a dị mfe ma dị irè.
Nke nta nke nta, aha ahụ bụ Diana von Furstenberg bịara mara ndị niile nwere ma ọ dịkarịa ala mmekọrịta ha na ụwa ejiji. Mụ na ya malitere ịkwado ndị na-emepụta ihe dị mma, nke mere na ika ahụ ruru ọkwa ọhụrụ ma ghọọ otu n'ime ndị na-emepụta uwe ejiji na ụwa.
Taa na nchịkọta nke ika a, ị nwere ike ịchọta uwe dịgasị iche maka ihe ọ bụla - mmanya, mgbede, ọfịs, na-esi ike, kwa ụbọchị na ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, onye ọrụ ahụ na-emepụta elu na uwe elu, ndị na-emepụta ihe dị mma, uwe na uwe, uwe na uwe, uwe, na cardigans, uwe mgbokwasị na uwe elu, yana ịke akwa na uwe mmiri na uwe.
Ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Diane von Furstenberg
"America Coco Chanel", dịka a na-akpọkarị na magazin site na Diane von Furstenberg, na-emepụta akpụkpọ anụ na oge a na-eme n'oge okpomọkụ. Na nchịkọta ya, e nwere nkedo, akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ na akwa ntụpọ, akwa ụkwụ na ikpo okwu, nakwa dị ka ihe ejiji ballet na espadrilles .
Kwa akwa akpụkpọ ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị amara na amara, ma, ọzọ, dị oke mma.
Akpa na ngwa ndi ọzọ Diane von Furstenberg
Akụkọ banyere ntọhapụ nke ngwa site na ika a malitere site na nchịkọta nke nchịkọta nke nwere akara atọ maka ìhè njem. Taa, ebe pụrụ iche n'etiti ngwa ngwa nke Diane von Furstenberg bụ njigide, n'ihi na a na-ahọrọ akpa a karịsịa site n'aka onye na-emepụta onwe ya.
Na mgbakwunye na akpa na nnukwu akpa, na nchịkọta nke ika ị nwere ike ịchọta silk na-egbuke egbuke na ákwà mkpuchi, wallets, ọla dị iche iche, ọla, na ugogbe anya maka anwụ.
Ihe dị iche iche na ngwaahịa ndị a ga - eme ka ndị ahịa kachasị achọ inweta ihe maka onwe ya.
Capsule uwe akwa maka ụbịa 2016
Nri eji eme nke oma 2017 - echiche kachasị mma na ụdị ejiji
Azụ ụmụ nwanyị - ejiji 2016
Nkume ụkwụ - Fall 2015
Uwe ejiji kachasị ejiji ejiji
Nhazi ihe eji eme ihe 2015
Mgbụsị akwụkwọ nchịkọta nke etemeete Dior 2013
Uwe ejiji maka ngụsị akwụkwọ 2016 na ntutu isi
Ekike - Ejiji Fall 2013
Akwa Uwe 2016
Ụdị na agba agba 2014
Egwuregwu European fashion spring-summer 2013
Henna esere aka
Ihe eji eme ihe - oge mgbụsị akwụkwọ 2016
Enwere anụ ugbo Loch?
Potato casserole na minced anụ na multivariate
6 uwe nke ga-eme ka isi iyi mmiri gị
Ụbọchị nke iri atọ na itoolu - ihe ịrịba ama nke ịmụ nwa
Melania Trump meriri ikpe megide Daily Mail, na enyefela $ 3 nde
Ụmụaka ejiji plastic
Nwa nwanyị Sylvester Stallone meriri ihe nlereanya Olympus
Nri nke ndị dọkịta - ụbọchị 14
22 photos, nke na-egosi na na Monday ụtụtụ zombies adị
Nri oatmeal maka oke ntụsara - menu na ihe oriri na-atọ ụtọ
Di na nwunye a lụrụ ọhụrụ lụrụ Intanet ugboro ugboro, taa ha kwurịtwara ya ọzọ
Osimiri Blue nke Kazakhstan - ntụrụndụ site savages
Ịkwụsị na Urnese
Iberibe na ude mmirimmiri - ihe ụtọ na dị mfe ntụziaka maka ụbọchị ọ bụla
Salad kukumba maka oyi - ihe kachasị mma maka nri nri dị ụtọ
Kedu ka esi belata imi n'ime ụlọ?
Shiitake mushrooms - ọma na ihe ọjọọ
Abụ ọhụụ Jay Z "4:44" kpụrụ ụda na mkpughe site na ndụ nke kpakpando ahụ
Julienne na poteto
Jam si plums maka oyi